Jawaabta saamiga - Public_Cellprov
Saami-unug – Sidaan baa loo sameeyaa
HPV självprov - somaliska
Länkstig, du är på sidan Jawaabta saamiga
Jawaabta saamiga (tijaabada) waxaa lagugu soo dirayaa guriga
Saamigaaga unug waxaa lagu baarayaa shaybaar. Da´daada iyo jawaabahaagii hore baa go´aaminaya sida saamiga loo baaro oo loo qiimeeyo. Jawaabta saamiga guriga baa lagugu soo dirayaa oo albaabkaa lagaga soo tuurayaa wuxuuna kusoo dhacayaa qiyaastii saddex bilood gudohood laga soo bilaabo markii saamiga unugga lagaa qaaday.
Jawaabaha saamiyaasha badankooda wax isbeddel muujinaya lagama helo. Markaas waxaa mar kale laguu yeerayaa inta u dhexaysa saddex illa todobo sano ayadoo ay ku xiran tahay da´daada. Marar dhif ah bay dhacdaa inay suurtogeli waydo in la qiimeeyo saamiga. Markaas waxaan kugu yeeraynaa in lagaa qaado saami unug cusub mar kale.
Haddii saamiga laga helo HPV
Jawaabta saamiga waxay tilmaami kartaa HPV inuu jiro ayadoo aysan jirin wax muujinaya isbedallo ku yimid unugyada. Markaas looma baahanayo baaritaan cusub illaa laga gaarayo saamiqaadka cusub. Laakiin si loo arko caabuqii HPV inuu buskooday iyo inkale waxaa muhiim ah in saami-unug cusub la qaado marka soo socota oo laguu yeero. Ayadoo ay ku xiran tahay hadba nooca HPV baa waxaa laguu yeeri doonaa 1,5- 3 sano kaddib. Kasii akhri hoos wixii intaa dheer oo ku saabsan HPV.
Haddii saamigu tilmaamo wax muujinaya isbedallo ku yimid unugyada
Isbedallada ugu badan ee unugyada ku yimaada ee la ogaado waa isbedallo sahlan qaar badanoo ka mid ahna iskood u buskooda. Qaar kalena waxay u baahan yihiin in la daaweeyo si aysan iskugu bedallin kanser. Haddii daryeelka caafimaadka ay helaan isbedallada unugyada ku yimid oo u baahan in la daaweeyo wakhti badan baa la haystaa. Caadiyan waxay qaadataa dhowr sano illaa intay isbedallada unugyada ku yimid ay ka noqonayaan kanser.
Haddii saamigu tilmaamo in isbedallo sahlan ku yimaadeen unugyada, laakiin aysan lahayn HPV, looma baahna caadiyan in lala sii socdo. Waxaa markaas lagugu yeeri doonaa saami-unug cusub saddex sano kaddib.
Haddii saamigu tilmaamo in lagaa helay isbedallo sahlan oo ku yimid unugyadaada iyo HPV waa inuu ku baaro dhakhtarka cudurrada haweenka. Xogtaada waxaa markaas loo dirayaa qaabilaadda cudurrada haweenka ee u dhow meesha aad deggan tahay oo waxaa lagugu yeeri doonaa baaritaan.
Waa maxay HPV?
HPV, humant papillomvirus, waa fayrus aad caadi u ah oo noocyo badan. Kuwa u badan maahan khatar laakiin qaar ka mid ah waxay sababaan isbedallada ku yimaada unugyada taasoo iyaduna keeni karta kanserka dhuunta ilmosidaha (ilmogaleenka). Dadka badankooda HPV wuu ku dhacaa mar ka mid ah noloshooda. Laakiin maadaama awsan keenin wax calaamado jirro bay dhif tahay inaan dareeno. Caabuqyada HPV badanaa iyagaa iskood u buskooda. Mararka qaarkood waxay keeni karaan isbedallo ku yimaada unugyada dhuunta ilmosidaha.
Sidee baan iskaga difaacaa HPV?
Waxaa jira tallaal loo qaato HPV haddii la qaato inta qofka da´diisu yar tahayna aad buu uga difaacaa noocyo ka mid ah HPV. Laakiin tallaalka difaaciisu ma dhammaystirna. Sidaas darteed bay muhiim tahay inaad aadid mar kastoo lagugu yeero qaadida saamiga unug.
Koondomku waxun buu HPV kaa difaacayaa. Boqolkiiba boqol ma kaa difaacayo maadaama fayrusku aw ku jiri karo meelo kale oo aan ahayn meesha difaaca heshay, laakiin aad buu uga fiican yahay difaac la´aan.
Dadka sigaarka cabba waxay khatar kasii wayn ugu jiraan in isbedallo ku yimaadaan unugyada iyo kanserka dhuunta ilmosidaha oo caabuqyada HVP keenaan. In la joojiyo sigaarka waxay ka qaybqaadanaysaa in isbedallada unugyada ku yimid dib u noqdaan oo dhakhso u buskoodaan. Haddii aad sigaar cabtid oo aad rabtid inaad sigaarka joojisid waxaa jira caawinaad aad heli kartid. La xiriir rugta caafimaadka ama Sluta-Röka-Linjen tel. 020-84 00 00.
Senast uppdaterad: 2019-04-23 15:26